Shimbiraha careysan ayaa dagaallamaya! Shimbiraha careysan ee ciyaarta la dagaallamaya | Wararka IPhone
Wararka IPad | | Noticias
ka sabti Kuwani had iyo jeer waa maalmo adag, bilowga usbuuca oo had iyo jeer umuuqda inuu yahay dagaal kacsan kadib fasaxii "gaaban" ee usbuuca. Maalin murugsan, haa, laakiin marwalba waan isticmaali karnaa qalabkeena iDevices si aan u iloobo bilowga usbuuca. Waana inay iDevices-ku noogu qiimo badan yihiin waxyaabo badan, way inaga mudan yihiin inay shaqeeyaan laakiin sidoo kale waxay mudan yihiin inay na maaweeliyaan, waxaana jira intaa iyo ka badan ikhtiyaarrada waa inaan ku madadaalinaa nafteena qalabkayaga iDevices.
Rovio waa mid ka mid ah noocyada horumarineed ee caan ku ah xayeysiinta Shimbiraha cadhooday, Ciyaaraha loo yaqaan 'franchise' kaas oo aan ku xakameyno xoogaa fiican shimbiraha yar yar ee u xilsaaran burburka ciidan doofaarro ah. Ciyaaraha qaar waligoodba kujiray 10-ka kulan ee ugu sareeya dhamaanba bakhaarada arjiyada wixii qalab mobilo ah, waana cayaaro aakhirka noqda kuwo balwad leh. Rovio wuxuu sii wadaa inuu horumariyo ciyaaro badan hoostiisa banner Angry Birds hadana waxay noo keeneen a ciyaarta dagaalka: Shimbiraha careysan Dagaal!.
Ciyaar ku saleysan dagaalada sumo sida aad ku arki karto fiidiyowgii hore, haa, ma awoodno inaanu aragno wax ciyaar ciyaar ah wali ciyaarta iyo waxaan si dhib leh uga ogaan karnaa wax ku saabsan hawlgalka Dagaalkan Shimbiraha Xanaaqsan!. Waxa aan ognahay waa taas waan la ciyaari karnaa saaxiibadeena, wax doono multijugador, waana heli karnaa gratuito (oo ku jira iibsashada barnaamijka), waxay sidoo kale u eg tahay ciyaar bilaash ah (waxaan ku ciyaari karnaa mid kastoo ka mid ah qalabka iDevices).
Bilawga qorshaysan ayaa ah guga 2015 markaa layaab malahan inaan ciyaari karno tan cusub Shimbiraha careysan dagaallama! Toddobaadyada soo socda. Sharad xiiso leh oo uu sameynayo Rovio oo isku dayaya inuu na siiyo qaabab cusub oo aan kula ciyaarno shimbiraha yar yar ee caanka ah. Waxaan dhegta u taagnaan doonnaa daahfurka cinwaankan cusub ee Rovio waxaanan kula soo socodsiin doonnaa isla marka lagu daabaco App Store.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Shimbiraha careysan ayaa dagaalamaya! shimbiraha careysan ee ciyaarta la dagaallamaya
Fikradda IPhone 7 ee ay dhiirrigelisay Apple Watch